Wararka - Ma waxaad raadinaysaa xoojiye signalka taleefanka gacanta ee ugu fiican guriga iyo xafiiska?
Ma waxaad raadinaysaa xoojiye signalka taleefanka gacanta ee ugu fiican guriga iyo xafiiska?
Xoojiya calaamadaha mobilada waxa uu qaataa calaamada daciifka ah ee jirta, waxa uu kordhiyaa si uu kor ugu qaado signalka taleefanka gacanta oo uu u wanaajiyo calaamadaha daciifka ah ee aaga guriga ama xafiiska.
Kingtone in ka badan20 noocXoojinta calaamadaha taleefanka gacanta ee caanka ah ee guriga iyo xafiiska, xoojiyayaasha signalada mobilada: 700MHz, 800 MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz,2100MHz,2600MHz waxay dabooli doontaa inta jeer ee shaqadaada iyo baahidaada100-5000 sqmMeelaha Daboolista.
2022 Kingtone Iibinta ugu Wanaagsan ee Iibinta Mobilkaka fiican2G,3G, 4G LTEcaymiska, soo dhawayn la isku halayn karo, iyo adeeg internet oo degdeg ah.
1.Qalabkan waxa ku jira oo kaliya xoojiye signalka,ma shaqayn karo la'aanteed anteeno iyo fiilada coaxial.
2. Fadlan hubi inta jeer ee signalkaaga meeshaada ka hor intaadan iibsan
3. Meesha daboolan ee gudaha waxay ku salaysan tahay xoogga ishaarada dibadda ee la heli karo.marka waxaad u baahan tahay inaad ogaato jawiga ishaarada deegaanka
4.Anteenada dibadda waxay u baahan tahay in lagu rakibo meesha calaamaduhu ku fiican yihiin sida caadiga ah 3-4 baararka
5.Anteenada dibadda khadka tooska ah ka soo celiyaha ilaa mitirka 10 si looga fogaado is-xakamaynta.
Waqtiga boostada: Meey-27-2022